Kitty For Me: 2009
Dong Bang Shin Ki - The Secret Code
CD 1 [MF] CD2[MF]
CD 1 [SB] CD2[SB]
Posted by Me at 12:49 AM 38 comments:
Roommate - Evening Promise [3rd Digital Single]
ဒီအခွေလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ Trax ထဲက Jay နဲ့ Kyuwan ဆိုထားတာ။ 3rd Single ဆိုတော့ တစ်ခြား အခွေတွေလဲရှိဦးမှာပဲ။ တစ်ခြားအခွေတွေလိုက်ရှာနေတာ အခုထိတော့ မသိသေးဘူး။ သီချင်းက ၃ ပုဒ်ပဲပါတာ နားထောင်လို့တောင် မ၀ဘူး။ ပထမဆုံး Luna က တီးလုံးလေးပဲ။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ Jay နဲ့ Kyuwan ဆိုတဲ့ သီချင်းလဲ မိုက်တယ်။ Trax သီချင်းတွေ တင်ဦးမှပဲ။ Trax လဲ အရမ်းကောင်းခဲ့တာပဲ။
02.시월애 (Song By 제이, 규완)
03.악몽 (Vocal Just)
Super Junior - Sorry Sorry [3rd Album]
03. Let's Not...
Download [MF] or [SB] or [ZS]
Posted by Me at 7:36 PM 104 comments:
၁ နှစ်နဲ့ ၆ လ စောင့်ထားရတဲ့ Suju 3rd Album ကတော့ တကယ်ကို အားရပါတယ်။ အခုထိတော့ yesasia က မှာထားတဲ့ အခွေက ရောက်မလာသေးဘူး။ အပြင်မှာလဲ ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေက တော်တော်ပြန့်နေပါပြီ။ ELF တွေက ချက်ခြင်းမတင်ကြဖို့ လုပ်ထားပေမယ့် တစ်ခြားသူတွေကတော့ တင်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ အခွေမှာထားပေမယ့်လဲ ထွက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းနားထောင်ချင်ကြတာပါပဲ။ ကံကောင်းတော့ အခွေထွက်တဲ့ညမှာပဲ ဒေါင်းလုပ်လင့်က ရလိုက်တယ်။ နားထောင်ချင်တာ သေမတတ်ပဲ။ :D
1) Sorry Sorry
တစ်ခွေလုံးရဲ့ အကောင်းဆုံးသီချင်းပါပဲ။ စပြီး preview ထွက်ထဲက အရမ်းကို ကြိုက်တာပဲ။ Performace တွေမှာလဲ ကတာ အရမ်းကို လှတာပဲ။ သီချင်းကလဲ အရမ်းမြူးတယ်။
2) Why I Like You
Why I like you.. cause you are my Super Junior... (like my friend said) .. ဒီသီချင်းက တတိယ အကြိုက်ဆုံး။ ဒီသီချင်းမှာလဲ ကတာတွေ လှတယ်။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းတယ်။
3) Let's Not
အဆွေးသီချင်းလေး။ KRY ဆိုတာများတယ်။ Wookie အသံလေးက နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ Kyu Hyun အသံကတော့ ပြောစရာကို မလိုပါဘူးလေ။
တစ်ခွေလုံးရဲ့ ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးသီချင်း။ ပထမဆုံးစစချင်း Kyu Hyun ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ သံစဉ်လေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ I love you everyday..........................
ဒီသီချင်းလဲ မိုက်တယ်။ Press the Reset !! Press the Rest !! Sukira Radio မှာတောင် Live ဆိုသွားသေးတယ်။
6) Monster ဒီသီချင်းကိုလဲ တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်။ Just like that.......
ဒါလဲ အဆွေးသီချင်းပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးလေး...နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ Dong Hae အသံကလဲ Rap လဲရသလို အေးအေးလေးလဲ နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲ။ (Dong Hae ကြိုက်တဲ့ ညီမလေး တစ်ယောက်တော့ မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီ )
ဒီသီချင်းမိုက်တယ်။ DBSK က U-Know နဲ့ Micky လဲ ၀င်ဆိုထားတယ်။ ဒီသီချင်းကိုလဲ လူတိုင်းလိုလိုကြိုက်ကြတယ်။ Yesung fan တွေက ပိုကြိုက်မယ် ထင်တယ်။ သူ့အသံပိုများတယ်။
9) Club No 1
ဒီသီချင်းတော့ သိပ်အကြိုက်ကြီးလဲ မဟုတ်ဘူး။ မကြိုက်ဖူးလဲ မဟုတ်ဘူး။ Lee Yeon Hee က featuring ၀င်ဆိုထားတယ်။ သိပ်အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။
10) Happy Together
သီချင်းလေးအတိုင်းပဲ။ Happy Together ပဲ။ သီချင်းလေးက ချစ်စရာလေး။
11) Dead at Heart
Kyu Hyun ရဲ့ အသံဆွေးဆွေးလေး ကြားရမယ့် သီချင်းလေး။
12) Shining Star
shining star! likealittle diamond, makes me love ... hyuk ရဲ့ Rap ကို အများကြီးကြားရမယ်။ ဒီသီချင်းလဲ သိပ်ကြိုက်တယ်။
တကယ်တန်းတော့ အကုန်လုံး ကြိုက်ပါတယ်။ super junior ကိုး။ သူတို့ ဘာလုပ်လုပ်ကြိုက်တာပါပဲ။ Why I Like You? Because you are our Super Junior (credit t0 :: my friend Jewel's Moon) :D
သီချင်းတွေ အကုန်လုံး translation ကအစ soompi forum ထဲမှာအကုန်လုံးရှိနေပါပြီ။
Super Junior 3rd Full Lyrics and Translation
After waiting 1 year and6months, our Super Junior is back !! I couldn't even breath while I was downloading this song this morning. The song is so nice. Me and my friends are listening again and again and again....... At first, we don't remember their voice. So Good !!!! Later, we can catch one by one. The first one we recognized was Wookie. And then Kang In, Dong Hae, my Kyu Hyun. haha... I was thinking that rapping is Micky from DBSK. But I know it can't be. Later we found out that is Yesung... We didn't catch Sung Min, Eeteuk and Hyuk. Ah.... waiting their come back stage on Music Bank on 13th March 2009. huuuuuuu..... our boys are back........
Super Junior - Sorry Sorry [MF] [SB] [ZS] [MU] [RS]
Super Junior - Sorry Sorry [English Translation]
mylovelylhj @ sjfullhouse.net (translations),
mnet (source) +
Labels: Super Junior, Super Junior Sorry Sorry